GỤỌ NKE Albanian Amharic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French German Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian
IRI ezigbo nri na inwe ezi ahụ́ ike na-abụkarị ihe ịma aka. N’ihi nrụgide ndị a na-enwe taa, o yiri ka ọ̀ na-aka adịrị ndị mmadụ mfe iri nri ndị dị ka bred na keeki kama ịga siwe nri ọhụrụ, ọ na-adịkwara ha mfe karị iji ohere ha nwere na-ekiri TV ma ọ bụ kọmputa kama iji ya na-enwe mmega ahụ́. Otú ọ dị, nhọrọ ndị a pụrụ ịdị na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ndị okenye na ụmụaka na-enwe nsogbu ahụ́ ike ndị dị njọ.
N’Eshia, ka magazin bụ́ Asiaweek na-ekwu, “iri nri ndị nwere abụba ma na-atọ bịrịbịrị nakwa àgwà ndị na-arịwanye elu nke ịnọ n’otu ebe, emewala ka ọnụ ọgụgụ mmadụ buru nnọọ ibu na-arịa ọrịa shuga.” N’ụzọ dị mwute, ọrịa ahụ na-arịakarịzi ndị na-akatabeghị ahụ́ n’etiti ọha mmadụ. Na Canada kwa, “ndị nnyocha chọpụtara na ọ bụ nanị otu onye n’ime ụmụaka asaa ọ bụla na-erubeghị afọ iri na ụma na-aracha mkpụrụ osisi ma na-eri akwụkwọ nri ruo n’ókè kwesịrị ekwesị [nakwa] na ọ bụ nanị ihe ji nke nta gafee ọkara na-egwuri egwu ruo n’ókè nke ọsụsọ ịgba ha,” ka akwụkwọ akụkọ bụ́ The Globe and Mail na-ekwu. Ụzọ ndụ dị otú ahụ na-eme ka ndị a na-eto eto nọrọ “n’ọnọdụ nke ịrịa ọrịa obi ngwa ngwa ka ha na-erule afọ iri atọ na ụma,” ka akụkọ ahụ na-ekwu.
N’otu aka ahụ, ndị ọkachamara banyere ụra na-ekwu na ọ pụrụ ịdị ndị toworo eto mkpa ihi ụra ruo ihe dị ka awa asatọ kwa abalị nakwa na ọ pụrụ ịdị ndị na-eto eto mkpa ihi ụra ruo ọbụna karị awa asatọ. N’ezie, n’otu nnyocha e mere na Mahadum Chicago, ụmụ okorobịa ndị ahụ́ gbasiri ike, bụ́ ndị hiri ụra nanị awa anọ kwa abalị ruo ụbọchị isii, malitere inwe mgbaàmà nke nsogbu ahụ́ ike ndị agadi na-enwekarị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-echu onwe ha ụra ọtụtụ awa maka ọrụ, ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ ntụrụndụ, ihe ndị ga-esi na ya pụta pụrụ ịdị iche n’ihe ha bu n’uche chuo onwe ha ụra. Onye na-eme nnyocha banyere ụra na Mahadum Cornell nke New York, bụ́ James Maas, na-ekwu, sị: “Ọ bụ otu ihe ịrụ ọrụ, ọ bụkwa ihe ọzọ ịmụrụ anya, iche echiche nke ọma, ma bụrụ onye ụra na-agaghị eburu mgbe ọ na-akwọ ụgbọala n’okporo ụzọ awara awara.”
N’ezie, ihe ndị ọzọ na-emetụtakwa ahụ́ ike anyị. Dị ka ihe atụ, inwe nchekwube pụrụ iso mee ka anyị nwee ezi ahụ́ ike. Inwekwa ezi nzube ná ndụ pụrụ ịkpali anyị ime nhọrọ ndị ga-enyere anyị aka ịnọgide na-enwe ezi ahụ́ ike.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Nhọrọ Ndị Na-emetụta Ahụ́ Ike Gị